भरतपुरमा रेनुलाई कहाँबाट आयो नसोचेको मत :: राजेश घिमिरे :: Setopati
किन खस्कियो एमालेको आफ्नै भोट?
चितवन, जेठ १३
निर्वाचन पोस्टमर्टम शृंखला- ५
स्थानीय चुनावअघि भरतपुर महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनको रणनीतिमा काम गरिरहेको ‘कोर टिम’ले एमालेले भन्दा पाँच हजार बढी मत ल्याएर मेयर जित्ने आकलन गरेको थियो।
जेठ १० गते आएको चुनावी परिणाम भने उनीहरूको आकलनभन्दा फरक थियो। अन्तिम मतपरिणाम देखेर उनीहरू आफैं दंग परे।
सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेकी नेकपा (माओवादी केन्द्र) की रेनु दाहाल निकटतम् प्रतिष्पर्धी नेकपा एमालेका विजय सुवेदीभन्दा १२ हजार ४ सय ४६ बढी मत ल्याइन्। सुवेदीले भने पाँच वर्षअघि आफ्नै पार्टीका मेयरका प्रत्यासी देवीप्रसाद ज्ञवालीले भन्दा ३३४२ कम भोट ल्याए।
मेयरमा निर्वाचित भएपछि रेनुले भनिन्, ‘हामीलाई यति धेरै मतान्तरले चुनाव जितिएला जस्तो लागेको थिएन। तीन हजारदेखि ७ हजारसम्म बढी भोट ल्याएर जित्छौं भन्नेचाहिँ थियो।’
रेनुल भनेझैं भरतपुरमा यसपालि एकातिर उनलाई सोचेभन्दा बढी भोट आएको छ भने अर्कातिर एमाले उम्मेदवारले पाँच वर्षअघि पार्टीका उम्मेदवारले पाएको मत पनि पाउन सकेका छैनन्। एमालेका उम्मेदवार ज्ञवालीले पाँच वर्ष ४२ हजार ९ सय २४ मत ल्याएका थिए। भरतपुरमा मतदाता यसपालि साढे १३ प्रतिशतले बढेका छन्। त्यस हिसाबले ज्ञवालीकै अनुपातमा मात्रै मत ल्याउँदा पनि सुवेदीले ४८ हजार ७ सय १८ मत ल्याउनु पर्थ्यो।
सुवेदीले जम्मा ३९ हजार ५ सय ८२ मतमात्र ल्याए। अर्थात् एमालेको मत ९ हजार भन्दा बढीले खस्कियो। कसरी यस्तो भयो भनेर एमालेभित्रै पनि कतिले शंका-उपशंका व्यक्त गरेका छन्।
कसरी भयो यस्तो? रेनुले भने कसरी आफैंले सोचेभन्दा धेरै मत ल्याइन्?
यो प्रश्नको जवाफ खोज्न हामीले चितवनका राजनीतिक दलका नेता, उम्मेदवार, मतगणनामा खटिएका कर्मचारी र पार्टीका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्‍यौं। उनीहरूमध्ये केहीले हामीसँग कुरा गरे पनि परिचय भने नखुलाइदिन आग्रह गरे। वडास्तरमा कांग्रेस र एमालेले पाएको मतपरिणामको पनि हामीले विश्लेषण गर्‍यौं। त्यसले भरतपुरको परिणाम किन यस्तो आयो भन्नेमा एउटा प्रष्ट तस्बिर दिन्छ।
पाँच वर्षअघि कांग्रेसको सहयोगमा पहिलो पटक भरतपुरको मेयर जित्दा रेनुले एमालेका देवीप्रसाद ज्ञवालीलाई २०३ मतको झिनो मतले हराएकी थिइन्। यसपालि उनले १२ हजार बढी मतान्तरले जित्नुमा प्रमुख कारण पाँच वर्षअघिको तुलनामा कांग्रेससँगको गठबन्धन कसिलो हुनु हो।
चितवन कांग्रेसले यसपालि भरतपुरको मेयर गुमाउन चाहेको थिएन। आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले सत्ता गठबन्धनबीच तालमेल गर्ने निर्णय गरेपछि चितवनका कांग्रेस नेताहरूले भरतपुरको मेयर गुम्न नदिन दबाब बढाएका थिए। पदाधिकारीसहित जिल्ला नेताहरू काठमाडौं गएर सबै शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर भरतपुरको मेयर अरू पार्टीलाई दिइए परिणाम नराम्रो आउन सक्ने चेतावनी दिए। पार्टी नेतृत्वका अघि उनीहरूको जोर चलेन। अन्ततः भरतपुरको मेयर माओवादीलाई दिने निर्णय भयो।
यो अवस्थामा भरतपुरका कांग्रेस कार्यकर्तामा आक्रोश व्यापक थियो। त्यसताका जिल्ला पार्टी कार्यालयमा दिनहुँजसो नेता, कार्यकर्ताको भेला हुन्थ्यो। सयौं कार्यकर्ताले केन्द्रीय नेतृत्वलाई निर्णय सच्याउन चेतावनी दिन्थे। त्यो माहोलले यसपालि भरतपुरमा गठबन्धन सफल हुनेमा ठूलो शंका उत्पन्न गरेको थियो।
उम्मेदवारी दर्ता भएपछि भने त्यो माहोलमा विस्तारै परिवर्तन आउन थाल्यो। कांग्रेसका जिल्ला नेतादेखि कार्यकर्ता रेनुसँगै घरदैलो अभियानमा देखिन थाले। बिच्किएका कांग्रेस कार्यकर्ता बिस्तारै पार्टी नेतृत्वको निर्णयको पक्षमा उभिन थाले।
निर्वाचनको केही दिनअघि हामीले भरतपुर महानगरपालिकाको २९ सै वडामा पुगेर २४२ जना मतदातासँग कुरा गरेको थियौं। उनीहरूमध्ये ३९ प्रतिशतले मेयर पदमा कसलाई भोट हाल्ने भनेर तय गरिनसकेको बताएका थिए। निर्णय नगरेका अधिकांशले आफू कांग्रेसको कार्यकर्ता रहेको बताएका थिए।
हामीले कुरा गरेकामध्ये २९ प्रतिशतले माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहाललाई, २३ प्रतिशतले नेकपा एमालेका विजय सुवेदीलाई र ९ प्रतिशतले स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडललाई भोट दिने बताएका थिए। रेनुलाई भोट दिन्छु भन्नेमध्ये ३४ प्रतिशत कांग्रेसका कार्यकर्ता थिए। यसको अर्थ थियो निर्णय गरिनसकेका कांग्रेसी नै भरतपुरको मेयरको निर्णयकर्ता हुन्।
त्यो बेला निर्णय नगरेका कांग्रेसका मतदाताले चुनावका दिन रेनु र बागी उम्मेदवार बनेका जगन्नाथ पौडेललाई बाँडेर भोट दिएको देखिन्छ।
रेणुको मत बढ्नुको दोस्रो कारण नेकपा (एकीकृत समाजवादी) हो। एमाले फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीले वडामा एमालेलाई हराउनमात्र होइन मेयरमा रेनुको मत बढाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।
एकीकृत समाजवादीको प्रभाव भरतपुरमा कम आँकिए पनि यो निर्वाचनमा प्रायः वडामा एमालेलाई हराउनमा उनीहरू निर्णायक देखिएका छन्। गत निर्वाचनमा एमालेले भरतपुरका १४ वटा वडामा वडाध्यक्ष जितेको थियो। यो निर्वाचनमा ६ वटा वडामामात्रै जित्न सक्यो। यसपालि जितेका ६ वडामध्येमा ११, १२ नम्बर वडामात्रै २०७४ सालमा एमालेले जितेका हुन्। बरू एमालेबाट एकीकृत समाजवादीमा गएका तीन जनाले यसपालि गठबन्धनबाट पहिलेकै वडामा वडाध्यक्ष जिते। एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ता मेयरमा रेनुलाई जिताउन गठबन्धनका अन्य दलका कार्यकर्ताभन्दा बढी खटेका थिए।
मतणनामा सहभागी एक कर्मचारीका अनुसार रेनुले गठबन्धनको मात्रै नभएर प्रतिपक्षीको पनि पर्याप्त भोट पाएकी थिइन्। रेनुले ठूलो मतान्तरले जित्नुमा त्यो तेस्रो कारण बन्यो। आफ्नो पक्षमा मत बढाउन उनको व्यक्तिगत प्रभावले काम गरेका प्रशस्त उदाहरण देखिए।
‘उपमेयर, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूमा अर्कोतिर भोट हाल्नेहरूले पनि मेयरमा दाहाललाई भोट हालेको पाइयो। एमाले, राप्रपाका कार्यकर्ताको जस्तो लाग्ने भोट उहाँले पर्याप्त पाउनुभयो,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षीकोसमेत भोट तान्न सकेकाले उहाँको मतान्तर फराकिलो बन्न पुगेको हो।’
कतिपय वडाहरूमा गठबन्धनका मतदाताले एमालेका वडाध्यक्ष उम्मेदवारलाई र एमालेका मतदाताले गठबन्धनको मेयरलाई भोट साटेको पनि देखिएको बताए। यस्तो भोट एमालेले आफ्नो प्रभाव बढी भएको भन्ने गरेका वडाहरूमा धेरै देखिएको उनले बताए।
‘नेकपा एमालेको राम्रो प्रभाव मानिने वडाहरूमा वडाध्यक्ष, सदस्य पद बरू माया मारौं, मेयरमा जसरी पनि जित्नुपर्छ भनेर लागेको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दाहाललाई पपुलर भोट पनि राम्रो आएको देखियो।’
नेकपा एमालेले कांग्रेसका बागी उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलका कारण निर्वाचन जित्न सहज हुने आँकलन गरेको थियो। जगन्नाथ पौडेलले कांग्रेसको अत्याधिक भोट ल्याउने र त्यसको घाटा गठबन्धनलाई हुने अनुमान एमालेका नेताहरूको थियो। उनीहरूले यही सोचका साथ आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई परिचालन गरेका थिए।
एमालेको अनुमानले फेल खायो। रनुले सजिलैसँग चुनाव जित्नुको चौथो कारण यही बन्यो।
जगन्नाथलाई कांग्रेसको भोट एमालेको अनुमानअनुसार आएन। जगन्नाथले पन्ध्र हजार भन्दा कममात्रै भोट ल्याउँदाको फाइदा गठबन्धनलाई भयो। एमालेले विगतमा कांग्रेसका असन्तुष्ट मतदाताबाट पाएको मत पनि यसपालि जगन्नाथकै कारण गुमाउन पुग्यो। विजय सुवेदी एमालेका कार्यकर्ताको मात्रै भोटमा समेटिन पुगे।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भरतपुरमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दा पटक-पटक कांग्रेसको नाम लिएर कांग्रेसका असन्तुष्ट कार्यकर्तालाई फकाउने प्रयास गरे तर राप्रपा र उक्त पार्टीबाट उपमेयरको उम्मेदवार बनेकी हिमला गुरूङको नामै लिएनन्। त्यसको असर पनि निर्वाचनमा परेको हुनसक्छ।
एमाले उम्मेदवार सुवेदीले सोचेभन्दा कम भोट पाउनुको कारण आफ्नै पार्टीका मतदाताले मत नदिएर हो त?
गणनामा सहभागी अर्का एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सुवेदीमाथि तालमेल गरेको दल राप्रपा र आफ्नै पार्टीका मतदाताले बराबर अन्याय गरेका छन्।’
गत निर्वाचनमा एमालेका ज्ञवालीले भरतपुर महानगरपालिकाका २९ मध्ये १४ वडा वडामा अग्रता लिएका थिए। ती वडाहरूमध्ये पनि वडा नम्बर २ र ११ मा उनले लिएको अग्रता एक हजार भन्दा बढी थियो। तर यसपाली सुवेदीले तीन वटा वडामामात्रै रेनुले भन्दा बढी भोट ल्याए। त्यो पनि असाध्यै थोरै मतले। उनले रेनुले भन्दा वडा नम्बर २ मा १३०, ३ मा ४१ र १२ मा २७५ भोट बढी ल्याएका थिए। अन्य २६ वटा वडाहरूमा रेनुले लगालग अग्रता लिइन्।
एमालेको सबैभन्दा बढी प्रभाव भएको मानिने भरतपुर-११ मा समेत यसपालि रेनुले १६९ भोट बढी ल्याएकी थिइन्। उनले वडा नम्बर ६ मा १३३९, १५ मा १०७९, २६ मा १३१० भोटले सुवेदीलाई पछि पारेकी थिइन्। अन्य वडामा भने रेन र सुवेदीको मतान्तर एक हजारभन्दा कम थियो।
गत निर्वाचनमा एमालेका वडाध्यक्षहरूले भरतपुर महानगरमा ३८ हजार बढी भोट ल्याएका थिए। मेयरमा ज्ञवालीले ४२ हजार ९ सय २४ भोट ल्याएका थिए। यसपालि उल्टो भयो।
एमालेले २९ मध्ये २८ वडामा वडाध्यक्ष उम्मेदवार उठाएको थियो। उसका २८ वडाध्यक्षहरूले ४४ हजार ६ सय १ मत पाउँदा सुवेदीले ३९ हजार ५ सय ८२ मतमात्र पाए।
भरतपुरमा एमालेको शक्ति विगतको निर्वाचनमा भन्दा घटेको हो कि होइन?
नेकपा एमाले चितवनका अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेले अहिले प्राप्त मतलाई हेरेर विगतको मतको ग्राफ ओरालो लागेको भन्न नमिल्ने बताए।
‘पहिले देविजीले ४३ हजार जति भोट ल्याएपनि हाम्रो मत त्यतिखेर ३८ हजार आसपासमा थियो। यसपाली विजयजीले त्यो भन्दा बढी भोट ल्याउनुभएको छ। यसपालि कांग्रेसबाट विद्रोही उम्मेदवार भएका कारण गठबन्धनसँग असन्तुष्ट भोट उतै गएको, राप्रपासँग तालमेल भएको तर मतदाता शिक्षाको कमीले गर्दा धेरै भोटहरू बदर भएका कारण भोट कम जस्तो देखियो,’ उनले भने, ‘यसलाई हाम्रो शक्ति घटेको भन्न मिल्दैन।’
यसपालि भरतपुर महानगरपालिकाको उपमेयर पदको परिणाम पनि रोचक छ।
उपमेयर पदमा गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका चित्रसेन अधिकारीले मेयर पदमा गठबन्धनकै उम्मेदवार रेनु दाहालले भन्दा जम्मा ७७५ भोट बढी ल्याए। जबकि उपमेयरमा उनकी मुख्य प्रतिष्पर्धी राप्रपाकी हिमला गुरूङ मात्रै थिइन्। मेयरमा जस्तो गठबन्धनकै मुख्य दलका विद्रोही उपमेयरका प्रतिष्पर्धी थिएनन्। तैपनि अधिकारीलाई दाहालको भन्दा थोरै मात्रै बढी भोट आयो।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयकाअनुसार भरतपुरको उपमेयरमा ४२ हजार ७ सय ८२ भोट(३४ प्रतिशत) बदर भएको छ।
उपमेयरमा यतिधेरै भोट बदर कसरी भयो होला? गणनालाई नजिकैबाट नियालेका प्रतिनिधिहरू भन्छन्, यसपालि उपमेयर पदमा धेरै भोट खाली भयो। उपमेयरमा खाली छाड्ने अधिकांश नेपाली कांग्रेसका मतदाता थिए।
‘हामीले मेयरमा भुइँकटहरमा भोट हाल्यौं तर उपमेयरमा भोट कसैलाई पनि हालेनौं। चित्रसेन अधिकारीकै कारण कांग्रेसले भरतपुरमा मेयर गुमाउनु परेको हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ,’ जगन्नाथ पौडेलका एकजना सहयोगीले सेतोपाटीसँग भने, ‘सबैकुरा जानीजानी उनैलाई भोट हाल्ने कुरो त भएन नि।’
उनले केहीले नियतबस नै उपमेयरमा कांग्रेस र राप्रपाका दुबै उम्मेदवारलाई भोट हालेर बदर बनाइदिएको बताए। अधिकारीले कांग्रेसको जनमत राम्रो हुँदा पनि माओवादी केन्द्रको बलमा चुनाव जित्नु परेको उनले बताए।
‘उनलाई आफ्नै वडावासीले धेरै भोट दिएनन्, राप्रपाले बलियो उम्मेदवार उठाएको भए वा एमालेले आफ्नै उम्मेदवार उठाएको भए चित्रसेनले चुनाव जित्ने थिएनन्,’ उनले सुनाए।
चितवनका कांग्रेस नेताहरूले भरतपुरको मेयर पद नछाड्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई दबाब दिइरहँदा अधिकारीले सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर भरतपुरको मेयर कांग्रेसलाई चाहिँदैन उपमेयर दिनू, सबै जिताएर ल्याइहाल्छु भनेको कुरा देउवाले पार्टीको बैठकमै सार्वजनिक गरिदिएका थिए। यसबाट कांग्रेसका पुराना कार्यकर्ता अधिकारीसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए।
अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसबाट उपमेयरको उम्मेदवार पार्वती शाह ठकुरीले मेयरले भन्दा ४०७० बढी भोट ल्याएकी थिइन्। यसपालि कांग्रेसका सबै कार्यकर्ताले भोट दिएको भए अधिकारीको भोट मेयरमा रेनुले ल्याएको भन्दा करिब १५ हजारले बढी आउनुपर्थ्यो।
उपमेयरमा केही माओवादीका मतदाताले हँसिया हतौडामै भोट हालेका थिए।
‘अघिल्लो पटक नेपाली कांग्रेसका धेरै मतदाताले उम्मेदवार नै नरहेको रूख चिन्हमा भोट हालेको बदला लिन खोजेको पनि हुनसक्छ। यसपालि माओवादी केन्द्रका मतदाताको जस्तो देखिने मतपत्रमा उपमेयरमा हँसिया हतौडामा स्वस्तिक छाप लगाइएको पनि भेटियो,’ एक जना गणकले सेतोपाटीलाई भने, ‘उपमेयरमा नेकपा एमालेका मतदाताको पनि धेरै भोट बदर भएको देखियो।’
भरतपुरमा मेयरमा एमालेलाई र उपमेयरमा राप्रपालाई सघाउने गरी गरिएको तालमेल प्रभावकारी नभएको गुनासो दुबै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले गर्दै आएका छन्। उपमेयर पदकी उम्मेदवार गुरूङले एमालेले मेयरमा राप्रपाको भोट राम्रो आएन भनेको जस्तै आफूहरूलाई पनि उपमेयरमा एमालेको भोट राम्रो नआएको अनुभूति भएको बताइन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १३, २०७९, ०७:५०:००